We.com.mm - ၂၀၁၇ မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အချောဆုံးစာရင်းဝင် Transwomen ၁၀ ဦး
တချို့တွေဆို သူတို့တွေကို မြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေဟာ သူတို့ရဲ့ Professional ကျတဲ့ နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်နေကြတဲ့ သူတွေလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ အားပေးခြင်း ကြည့်ရှု့ခြင်းခံနေရတဲ့ ယောက်ျားလေးမှမိန်းကလေးအဖြစ်သို့ လိင်ပြောင်းထားတဲ့ Transgender တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Social Media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Instagram, LINE, WeChat, Snapchat စသဖြင့်နေရာတွေမှာ သူတို့ဟာ အမာခံပရိသတ်တွေကိုယ်စီရှိနေတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး၊ ဘယ်သူက အအောင်မြင်ဆုံး ၁၀ ဦးထဲက ထိပ်ဆုံးရောက်နေလဲဆိုတာ ခုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
10. Chalisa “Rose” Yuemchai (ရို့စ်)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၇ မီလီယံ လောက် ဝင်ငွေရရှိခဲ့တဲ့ Lost In Thailand တရုတ်ဟာသဇာတ်ကားလေးမှာ အရံအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Chalisa “Rose” Yuemchai ဟာ ခုဆို ပရိသတ်များရဲ့ အသိမှတ်ပြုခြင်းကို ခံနေရတဲ့ အလှပဂေး တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ထိုဇာတ်ကားထဲမှာ Rose ဟာ တရုတ်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆို သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေတော်တော်များများ အံ့သြပြီး ချီးကျူးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းကိုလည်း ရရှိနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
9. Patta “Nadia” Wiruntanaki (နဒီယား)
Nadia ဟာ ပတ္ထရာမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Miss Mimosa Queen Thailand in 2015 ရဲ့ Winner ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ Nadia ဟာ အများရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရရှိလာပြီး ခုဆိုရင် Freelance မော်ဒယ် နဲ့ Dancer တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
Facebook မှာ Followers ၁သိန်းကျော်ရရှိတဲ့ Pynk တစ်ယောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Surgery ဆေးရုံတစ်ခုမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံရပြီးနောက်မှာ ဆေးရုံရဲ့ Spokesmodel တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၀ သာရှိသေးတဲ့ Jeen တစ်ယောက် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ယာယီဥပဒေတစ်ခုကြောင့် ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် မီဒီယာတွေရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူမရဲ့ ပုံစံအနေအထားဟာ စစ်တပ်မှာ ရှိမနေသင့်တာဆိုပေမယ့်် သူမဟာ ထိုစစ်သားတွေကြားမှာ နာမည် ရရှိလာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တော်တော်များများ သူမနဲ့ ပုံတွေရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယာယီစစ်မှုထမ်းစနစ်ဝင်တုန်းကဆိုရင် အသက် ၂၂ ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Frame တစ်ယောက် Media ရဲ့ ဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာ အပြစ်အနာအဆာမရှိအကြည့်တွေဟာ ထိုယာယီစစ်မှုထမ်းရခြင်းကိစ္စမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက် များစွာသော ထိုင်းရုပ်သံလိုင်းရဲ့ Interviews တွေ မေးမြန်းခြင်းခံရပါတယ်။ ပြီးတော့ Frame ဟာ ထိုင်းရဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Crazy Love မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ မျက်နှာပုံစံကြောင့် Social Media မှာ လူသိများလာတာပါ။ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမက နာမည်ကြီး ထိုင်း Country အဆိုတော် Baitoey Rsiam ရဲ့ Music Video မှာလည်း ခဏခဏပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Yoshi ဟာ ဇာတ်လမ်းတွေ ရိုက်ကူးဖို့ အစီအစဉ်ရှိသလို Instagram မှာ Followers ၁ မီလီယံ လောက်ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Hana ဆိုတဲ့သူမဟာ The Face Thailand Season3ဝင်ပြိုင်တုန်းက ပရိသတ်တွေအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ The Face Thailand Season3ပြိုင်ပွဲဝင်များစွာထဲက ရွေးချယ်ခံရခဲ့ခြင်းဆိုပေမယ့် Winner ဆုနဲ့ လွဲခဲ့ရပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှာ ကျန်နေခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် သူမရဲ့ Fans တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Hana ဟာ ဒီ ပြိုင်ပွဲကို ဝင်မပြိုင်ခင်ကတည်းက ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိပြီးသားနဲ့ အောင်မြင်ပြီးသား မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် The Face Thailand Season3ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်ဖူးတဲ့ Blossom ဟာ ပြိုင်ပွဲရဲ့ Top3နဲ့ လွဲခဲ့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူမဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်မပြိုင်ခင်ကတည်းက အားပေးတဲ့ အမာခံပရိသတ်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ အရှိဆုံး Trans Pageant တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Miss Tiffany’s Universe 2013 မှာတုန်းကလည်း 1st Runner-Up ဆိုကို ဆွတ်ခူးရရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေထဲက တစ်ဦးကတော့ မနှစ်က Miss Tiffany’s Universe Thailand မှာ Winner ဆုရရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာ Transgender ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Miss International Queen မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝင်ရောင်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ Winner ဆု သရဖူ ကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် သယ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့သူ Mo ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုပြိုင်ပွဲဝင်မပြိုင်ခင်မှာ Mo ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ သီချင်းဆို Show တခုဖြစ်တဲ့ “I Can See You Voice” မှာ သူမဟာ ယောက်ျားလေးပီသ တဲ့အသံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာမို့ ပရိသတ်တွေပိုပြီး အံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။
1.Treechada “Poyd” Petcharat
နှစ်တွေကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဒီနှစ်အလှဆုံး Transgender ဖြစ်လာခဲ့သူတစ်ဦးကတော့ Poyd ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆက်ဖြစ်လာမယ့် Transgenders တွေအားလုံးအတွက် စံပြသူတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
Poyd ဟာ လက်ရှိမှာ မင်းသမီးနေရာတွေမှာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို Professional ကျကျ လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် US ရဲ့TC Candler ရုပ်ရှင် မဂ္ဂဇင်းမှာလည်း “Most Beautiful Faces” ဟု ဖော်ပြခြင်းခံရသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Source - Coconut BKK
မျက်နှာအသားအရေနဲ့ ဆံသားတွေကိုကောင်းမွန်စေမယ့် ရေခဲရဲ့အသုံးဝင်ပုံ (၄) ခု…
နွေရာသီမှာ သစ်သီးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းများ
လှပတဲ့အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဒီအကျင့်လေးတွေကိုပဲ ပြုပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်
ကြည်လင်တောက်ပတဲ့အသားအရေအတွက်အကောင်းဆုံးဖျော်ရည် (၉) မျိုး